जनकपुरधाम । चैत्र । ३१ गते ।उद्योग वाणिज्य संघमा नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि शनिवार मतदान सम्पन्न भयो। जनकपुरको निकै पूरानो र जेठो व्यवसायीहरूको छाता संस्था उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनले विशेष महत्व राख्ने गर्दछ । चुनावमा आफ्ना पक्षका व्यवसायीलाई जिताउन नेता, जनप्रतिनिधी समेत लाग्ने गरेको समेत पाईनछ । यस पटकको चुनावमा भारी मतान्तरका साथ विगत १६ वर्ष देखि व्यवसाय गर्दै आएका संघकै निवर्तमान महासचिव, पूर्व कोषाध्यक्ष समेत रहेका युवा व्यवसायी जितेन्द्र महासेठ विजयी भए । संघको निर्वाचनमा उमेदवारहरूले निकै ठुलो धनराशि खर्च गरेको भन्ने आरोप लागे पनि नवनिर्वाचित अध्यक्ष महासेठले भने पर्चा पम्पलेटबाहेकमा आफूले खर्च नगरेको दाबी गरेका छन् । जनकपुरधामका व्यवसायीहरूको हकहितमा ठोस योजनासहित काम गर्ने बताृँदै आएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष महासेठसँग उनको जीत र आगामी योजनालाई लिएर कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ, टुडे एक्सप्रेसकर्मी श्रीकान्त झाले अध्यक्ष महासेठसँग गरेकोे कुराकानीको सम्पादित अंश :-
संघको अध्यक्षमा भारीमत अन्तरले निर्वाचित हुँदा कस्तो लागि रहेको छ ?
धेरै खुसी लागि रहेको छ । म माथि आशा र विश्वासका साथ यहाँका व्यवसायिहरूले मलाई भारी मतले विजय बनाउनु भएको छ । मैले उहाँहरूलाई गरेको बाचा जुन मेरो घोषण पत्रमा लिखिएका कुराहरू छन्,त्यसलाई पालना गररे म त्यो पूरा गर्ने छु। मलाई अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनु हुने सबै व्यवसायी मित्रहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। म अब उहाँहरूको ऋणि भएको छु। संघका राम्रो काम गररे त्यो ऋण तिर्ने प्रयत्न गर्नेछु ।
अरु उमेदवार र तपाईको घोषणपत्रमा के फरक थियो र तपाईकै घोषणपत्रलाई मन पराएर यहाँको व्यवसायीले तपाईलाई मत दिए ?
हुन त नेतृत्वमा जो आए पनि व्यवसायीको हितमै काम गर्ने हो। मैले अरुले भन्दा फरक योजनाहरू घोषणा पत्रका समावेश गरेको थिएँ। घोषणापत्र पढेरै मन पराएर, म माथि भरोसा राखेर उहाँहरूले मलाई मत दिनु भएको मलाई पूर्ण विश्वास छ । र म मेरो घोषणपत्रमा लेखिएका बाचाहरूलाई क्रमशः र अक्षरस पालना गर्दै पूरा गर्दै जानेछु। यसमा संघका अन्य पादधिकारी साथीहरूले पनि सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ । धनुषा जिल्लामा १७ हजार ७ सय ५६ व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू छन्। त्यसलाई संगठित गर्ने, वस्तुगत संघहरू छन् त्यसलाई सक्रिय गर्ने र जुन वस्तुगत संघगहरू छैन त्यसलाई गठन गर्ने योजना छ । त्यो प्रकृयाका लागि हामीले ३ महिना काम गर्नु पर्छ, र सम्भवत धनुषाका १८ ओटै स्थानिय तहमा हाम्रो जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको समकक्षी शाखाहरू वा प्रदेश अन्र्तागत हुन्छ उहाँहरूसँग कोडिनेसन गर्ने र त्यो क्षेत्रको व्यवसायिकलाई जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघबाट दिने सुविधाहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य छ ।
उहाँहरूको कठिनाई संगठित गर्नु अवश्यक छ, किन आवश्यक छ भने उहाँहरूको जुन मार्काहरू, पिडाहरू र कठिनाईहरू छन् त्यसमा जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघले सहजता पुराउन सकोस । त्यस्तै मेरो घोषणपत्रको कुराहरूमा महत्वपूर्ण कुराहरू के छ भने वयवसायिहरूको व्यवसाय संचालन गर्दा खेरी केहि वेसिक नलेजहरू प्नि हुनु आवश्यक छ । उहाँहरूको व्यवसायलाई अगाडी बढाउन, प्रवद्र्धन गर्न उहाँहरूलाई विभिन्न खाले तालिमहरूको व्यवस्था गर्ने । कति व्यवसायिहरूले प्यान लिनु हुन्छ, भ्याट लिनु हुन्छ, त्यसपछि यसको कर कहिले बुझाउने, के गर्ने ? कसरी मेन्टेन गर्ने । त्यो प्राविधिक समस्या उहाँहरूलाई आईरहेको हुन्छ । र त्यही समस्या सामाधान गर्नको लागि जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघमा एउटा ट्रेनिङ्ग यूनिटको स्थापना गर्ने ठुलो योजना छ ।
संघमा आवद्ध हुन बाँकी व्यवसायीलाई कहिले सम्म समेट्नु हुन्छ, उनीहरूलाई समेट्नका लागि तपाईको योजना के छ ?
अवश्य १७ हजार ७ सय ५६ यो पछिल्लो सरकारी डाँटा अनुसार जनकपुरधाममा मात्रै हैन धनुषा जिल्ला भरी कै हो। त्यसमा १७ हजार ७ सय ५६ मध्ये ५ हजार २७ हाम्रो जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता लिई सक्नु भएको छ । र अझै १२ हजार व्यवसायिले सदस्यता लिन बाँकीे छ । सम्भवत म उहाँहरूलाई पनि सदस्यताको दायरामा र उद्योग वाणिजय सघमा जोड्न पहल गर्छु । र त्यसपछि जहाँ सम्म शुल्कको कुरा छ, सम्पूर्ण व्यवसायि लगायतलाई के जानकारी गराउ भने सदस्यता र नविकरणको चर्को शुल्क छैन । प्रवेश शुल्क ९ सय रुपैयाँ लाग्छ र वार्षिक साढे ३ सय रुपैयाँ मात्रै तिर्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेत खाजा मै ३ सय जान्छ भने व्यवसायिक संगठनमा आवद्ध भएका व्यावसायिहरूलाई मलाई लाग्दैन वर्षको नविकरणको ३ सय रुपैयाँ चर्को हो ।
निर्वाचनमा ठुलो खर्च भएको देखियो तपाईले शालाखाला कति खर्च गर्नु भो ? सर्वजनिक गरिदिनुस् न ?
मेरो पोष्टर पम्पलेट बाहेक केहि खर्च भएको छैन्, तपाईलाई विश्वास न लाग्ला । किनभने खर्च जे जति भयो जुन व्यवसायिहरू आउने, कति व्यवसायिहरूलाई सम्पूर्ण जे जति खर्च छ र व्यवस्थापनको पाटाहरू छ त्यो हाम्रो व्यवसायिहरूले नै गरिदिएका हुन्। सहयोग स्वरुप गरिदिएको हो। तेहि भएर मलाई कति खर्च भयो भन्दा मलाई त्यो कुरा जानकरीमा छैन । मेरो जुन पोष्टर पम्पलेट लगायतको छ, प्रेसमा गएर हेर्दा कति बिल आउछ, बिल तिर्न बाँकी छ । त्यो पनि रकम म काँहा आई सकेको छैन ।
चुनाव खर्चिलो हुँदा चुनावबाट निर्वाचित तपाईहरूले व्यवासयीको हितमा काम गर्नु हुन्छ भनेर पत्याउनु कसरी ?
जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको क श्रेणिको उद्योग वाणिज्य संघ हो। पुरानो हो २००९ सालमा स्थापना भएको हो। महङगो चुनावमा जो खर्च गर्छ उहाँलाई थहा होला । मैले खर्च गर्नु परको े छैन गरिन पनि । त्यो भएर मलाई चुनावमा हुने खर्चबारे थहाछै न । लगभग उद्योग वाणिज्य संघको कुरा गर्नु भयो भने एउटा यस्तो प्लेटफम हो, मेरो बुझाईमा र मेरो ध्यान केन्द्रीत कहाँ छ भने निर्वाचित भएर त्यहाँ गएर काम गर्न सकियो भने, व्यवसायिको सेवा गर्न सकियो भने, चेयरसँग जस्टिफाई गर्न सकियो भने त्यो भन्दा अगाडीको बाटोहरू पनि खुल्छ । मेरो फोकसको विषय र उद्ेश्यको विषय त्यहि नै हो। र म तिन वर्ष उद्योग वाणिज्य संघमा आफ्नो काम देखाएर व्यवसायिहरूको सेवा गररे जुन व्यवसायिहरूको आर्थिक गतिविधि वढाउनेदेखि लिएर जनकपुरधामलाई एउटा पर्यटकीय स्थलको रुपमा कसरी गर्ने गर्ने भन्ने सोचमा छु। अद्योगको रुपमा कसरी स्थापना गर्ने त्यो कुराहरूमा पहल गर्छु। यहाँको आर्थिक गतिविधि कसरी अगाडी बढ्न सक्छ, यहाँका व्यवसायी सक्षम र समृद्ध कसरी हुन सक्छन्, त्यो सम्पूर्ण कुरामा म अगाडी बढ्ने छु।
तपाई तत्कालै गरिहाल्ने कामहरू के के छ ?
सबभन्दा पहिला जनकपुरधाममा विकास निर्माणका कामहरू जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ भन्दा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू र अन्य निकायहरूको हो। तर यहाँको व्यवसायिक गतिविधि अगाडी बढाउनेदेखि लिएर हरेक काम हामी गर्छौ । यहाँका व्यवसायीको व्यवसाय राम्रो भयो भने मात्रै सरकारलाई कर पनि उनीहरूले धेरै तिर्न सक्छन्। र त्यही सरकारलाई बुझाएको राजश्वले फेरी हामी कहाँ फर्केर विकास हुन सक्छ, त्यसमा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको पहल हुने छ । र जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघले त्यस्ता निकायहरूसँग सहकार्या गररे आवश्यक विकास निमार्णका कामहरू छन्, पर्यटन क्षेत्रमा होस्, व्यवसायिक क्षेत्रमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा होस् सम्वन्धित निकायलाई आग्रह गररे दबाब श्रृजना गरेर उनीहरूसँग सहकार्य गरेर भएपनि संघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ भन्ने हुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा फोहोर व्यवस्थापनको कुराहरू छ । यो कमजोरी नै छ, सफाई हुने र कहिले काहिबिच बिचमा २ देखि ४ दिन सफा नै नहुने जस्ता अबस्थाहरू छ । सुक्ष्म रुपमा हामीले यि कुराहरूको अध्ययन गरेका छौं । सम्बन्धित जति निकायहरू छ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वा सम्वन्धित निकायहरू छ, त्यसमा हामीले त्यो कुरा बुझने प्रयास गर्छौ र कहाँ कठिनाई छ त्यहाँ सहयोगि भूमिका खेलेर यो सहर राम्रो कसरी हुन सक्छ त्यो सम्पूर्ण कुरामा म पहलकर्मी हुनेछु ।
व्यवसायिहरूलाई सुरक्षित तवरले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन तपाईको कस्तो कदम हुन्छ ?
सुरक्षाको विषयमा भन्नु पर्दा अरुअरु ठाउँहरूको सुरक्षाको अवस्था देख्दा जनकपुरधाम अन्त भन्दा सुरक्षितै छ, शान्त छ । अहिले नेपालको राजनितिक परिवेश र घटनाको चलिरहेको छ त्यो हिसाबले जहाँ पनि जे हुन सक्छ भन्ने मनमा अलिकति भय र त्रासको वातावरण हुन्छ । तथापी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको एउटा अध्यक्षको हैसियतमा भन्छु कि, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले यहाँका व्यवसायीहरूलाई सुरक्षित तबरले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण हामी बनाउँछौं । हिजोको दिनमा के थियो त्यसलाई छोडौं अब आगामी दिनमा यहाँका व्यवसायीको जिम्मा हामी लिन्छौं । उहाँहरूको व्यवसायिक हितमा काम गर्नु हाम्रा जिम्मेवारी पनि हो, कर्तवय पनि हो र चासोको विषय पनि हो। विगतमा पनि कुनै स्थानबाट गुनासो आएपनि हामी तुरुन्त बुझ्ने सहयोग गर्ने प्रयास गरेकै थियौं र आगामी दिनमा पनि अब अध्यक्ष भएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी उद्योगी ब्यवसायिहरूको सुरक्षादेखि लिएर उहाँहरूको व्यवसायलाई कसरी प्रवद्र्धन हुन्छ कसरी राम्रो हुन्छ सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी म लिन्छु र लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
चुनावमा धाँधली भयो भन्ने कुरा आयो नि के भन्नु हुन्छ ?
मतगणनाको दिन दिनभरीको माहौल अलि विवादस्पद नै थियो। तर सुरु मै मत गणना सम्पन्न भईसकेको थियो। र अरुअरु पदमा केहि कठिनाईहरू आईरहेको थियो। मेरो पदमा कुनै विवाद थिएन । किनभने मेरो र प्रतिपष्र्धीको मत बीच फरक नै १३ सय ३७ थियो। म आफै संर्घषमा बसिरहेको थिएँ की जब विजय भए तब मैले प्रमाणपत्र पाउँनु पर्छ। र आधिकारीक रुपमा घोषणा गर्नु पर्छ। अरु साथीको के समस्या भयो त्यो मलाई खासै जानकारी भएन । मेरोमा कुनै समस्या थिएन तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्। अरु विषय जानकारीका लागि निर्वाचन आयोगमा जानु भयो भने पाउँनु हुन्छ ।
अन्तमा पराजित साथीहरूलाई कसरी समेटन हुन्छ, उहाँहरूको सहयोग कसरी लिनु हुन्छ ?
म माथि नेतृत्वको जिम्मेवारी आएपछि सम्पूर्ण साथिहरूलाई आग्रह गररे अघि बढ्छु। हामी सबैको अभियान एउटै थियो व्यवसायिको सेवा गर्ने त्यहि भएर सम्पूर्ण साथिहरूमा म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु की जो पदमा हुन्छ त्यसलाई जति जिम्मेवारी हुन्छ उतिकै नै पदमा नभएकालाई पनि जिम्मेवारी हुन्छ किनकी उद्ेश्य सेवा गर्नु नै हो। त्यसैले हामी चुनावमा मात्रै प्रतिष्पर्धी हौं । हामी लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई मान्ने देशका नागरिक हौं । चुनावमा हुने प्रतिष्पर्धा चुनाव सकिएपछि सहकार्यमा बदलिने गर्दछ । त्यसैले व्यवसायिक हितको लागि हामी सबै सँगै हातेमाले गररे अघि बढौं म सबै व्यवसायी साथीहरूलाई आग्रह गर्नु चाहान्छु।
23 दिन पहिले 92 Post Views
स्थानीय क्राईम विशेष सामाचार
लकडाउनले बढायो बालात्कार, प्रदेश २ मा साउन र भदौमा मात्र बलात्कारका ७६ वटा मुद्दा दर्ता, प्रहरीको विशेष अनुसन्धान सुरु छ प्रवक्त प्रसाई
स्थानीय विशेष सामाचार क्राईम
जनकपुरधामको विचबजारबाट लागुऔषध सहित दुई जना पक्राउ,थप अनुसंन्धान जारी